LONDON (Reuters) - Britain’s government says it was deeply concerned by violence following Zimbabwe’s elections and by the “disproportionate response from the security forces.”
At the same time, the United States said on Friday it was reviewing Zimbabwe’s election results and called on political leaders to “show magnanimity in victory and graciousness in defeat” after the opposition disputed whether President Emmerson Mnangagwa had won the vote.
Nelson Chamisa of the MDC Alliance has rejected the presidential election results saying they were “fraudulent and illegal” as information in their possession from all polling stations indicates an outright victory for Chamisa.
On the other hand, President elect Emmerson Mnangagwa says the opposition should follow laid down proceedures in its attempt to nullify the results of the election.
The ruling Zanu PF party returned its majority in the House of Assembly while the MDC Alliance only managed to boost its numbers by a few seats. It has 63 parliamentary seats.